तिम्रो ‘वाद’ के हो ?
विचार तिम्रो ‘वाद’ के हो ? डा. सुरेन्द्रसिंह रावल
मानिस सामाजिक प्राणी त हुँदै हो, राजनीतिक प्राणी पनि हो । त्यसैले त मानिसले राजनीतिमा चाख राख्छ वा राजनीतिक चिन्तन गर्छ । चाख र चिन्तनमात्र नभई कतिपयले राजनीतिलाई मुख्य ‘पेसा’ वा कर्म बनाएका हुन्छन् । अझ भनौ राजनीति गर्छन् । केहीले सिद्धान्त अथवा सोखका लागि पनि राजनीति गरिरहेका हुन्छन् । कैयौंले राजनीतिबाटै समाज सेवा गरिरहेको महसुस गरेको पनि भेटिन्छ ।
राजनीतिको चर्चा हुँदा विभिन्न वाद तथा प्रतिवादका सबालहरु पनि आउँछन् र ती वादप्रतिवादका समर्थन र विरोधका कुराहरु पनि हुन्छन् । वादसँगै राजनीतिक पार्टी र तिनका गुट र उपगुटका कुरा पनि आउने नै भए । अहिले विश्व यिनै वाद, दल, गुट आदिबाट गुज्रिरहेको छ । हाम्रो देश पनि यसबाट अछुतो छैन । अझ हेर्दा यस्तो लाग्छ अन्यत्रभन्दा नेपालमा राजनीतिक चेतना केही बढी नै छ । त्यसैले त यहाँ मानिसहरुलाई प्रायशः वाद, दल अथवा गुट आदिको दृष्टिकोणबाट हेर्ने यत्न हुन्छ ।
मलाई हालसालै कसैले मेरो राजनीतिक आस्थाका बारेमा कताकता प्रश्न गरेजस्तो लाग्छ – चाहे त्यो सामाजिक संजालमा अन्तरक्रिया गर्दा होस् या अन्य कुनै रुपमा । मानौ कसैले औंला ठड्याएर सबाल गरिरहेछ – “तिम्रो वाद के हो?” अनि म आफैँलाई सोध्छु — “मेरो वाद के हो?” तर मनको अन्तरकुन्तरबाट कुनै ठोस जबाफ आउँदैन ।
अनि म पुनः आफैँलाई सोध्छु के मेरो वाद हुन जरुरी छ? के म कुनै वाद वा दलप्रतिको आस्थाविना एक सच्चा देशभक्त हुन सक्तिन? के हरेक व्यक्तिले कुनै वाद या दलमा समाहित हुनै पर्छ ? के कुनै एउटा वादको पछि नलागी मेरो राजनीतिक चिन्तन अपूरो हुन्छ? अथवा भनौ, के म सबै वादको राम्रो पक्षलाई अङ्गीकार तथा नराम्रा पक्षलाई त्याग गर्न सक्दिन? के मेरो राष्ट्रियता र देशभक्ति वाद र दलका समर्थन र विरोधको माध्यमबाट प्रकट नगर्दा कमजोर हुन्छ? मूल प्रश्नको प्रतिउत्तरमा म यी यावत् प्रश्नको जबाफ खोज्न प्रयत्नरत हुन्छु ।
राजनीतिक दलहरुलाई वर्गीकरण गर्ने कुनै सर्वमान्य सिद्धान्त नभए पनि सामाजिक परिवर्तनप्रति तिनका धारणाको आधारमा वामपन्थी, दक्षिणपन्थी र मध्यमार्गी भनी विभाजन गरिन्छ । सामाजिक परिवर्तन, स्वतन्त्रता र प्रगतिका पक्षपाती दल वामपन्थी मानिन्छ भने यथास्थितिवादमा विश्वास गर्ने दल दक्षिणपन्थी ठानिन्छ ।
यी दुवै विचारधाराको मध्यमार्गलाई अवलम्बन गर्ने दल मध्यमार्गी दल भन्ने बुझिन्छ । तर, यो दलहरुलाई हेर्ने एकदमै सतही दृष्टिकोण हो । यी दुई ध्रुबबीच अनेक प्रकारका वाद तथा तिनका हाँगाबिँगा भेटिन्छन् । राजनीतिक विचारधारा ध्रुवीयमात्र नभई कुनै विषयप्रतिको अडान, आस्था, रणनीतिजस्ता विविध धरातलमा समेत अडेको हुन्छ । लोकतन्त्रवादी, समाजवादी, साम्यवादी, प्रगतिशील, राजतन्त्रवादी, गणतन्त्रवादी, राष्ट्रवादी, धार्मीक, उदारवादी, लोकप्रियवादी, अन्तर्राष्ट्रियवादी, वातावरणवादी आदि तथा तिनका संयोजनबाट निःसृत सयौं प्रकारका दलहरुको अस्तित्व विश्वमा छ । हाम्रै देशमा समेत राष्ट्रिय तहमा रहेका पार्र्टीहरु सहित १३२ वटा राजनीतिक दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका छन् ।
यी सबै राजनीतिक दलहरु सिद्धान्त, संगठन, सक्रियता आदि सम्पूर्ण पक्षबाट परिपूर्ण छैनन् । राम्रा नराम्रा पक्ष सबैमा छन् तर के कति छन् भन्ने व्यक्तिविशेषको हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि धेरै हदसम्म भर पर्छ । जुन राजनीतिक पार्र्र्टी समाजमा लोकप्रिय हुन्छ त्यसैको विचारधारालाई बहुसंख्यक समाजले स्वीकारेको मान्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक दलहरुको लोकप्रियता पनि सधैँ एकनास नरहन सक्छ । दलको कृत्य तथा समाजको धारणामा आएको चेतना वा चाहनाको बदलावसँगै जनमानसले तिनलाई स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने हुन्छ ।
अपितु, केही व्यक्तिमा कुनै निश्चित् राजनीतिक दलप्रति आबद्धता भएकै कारणले उक्त दलविना देश खत्तम् हुन्छ भन्ने सोच बनेको देखिन्छ । मानौ उक्त दल सर्वगुण सम्पन्न छ र अन्य राजनीतिक पार्टीहरू पूर्णरुपमा खराब छन् । आफ्नो पार्र्टीलाई राष्ट्रवादी देख्नेले अर्को दललाई अराष्ट्रिय देख्छ ।
उनीहरुको जिकिर सुन्दा यस्तो लाग्छ त्यो दल भएन भने देश नै रहँदैन । मानौ राजनीति भनेको ‘जिरो सम गेम’ हो जहाँ एउटाको वर्चस्वमा अर्काको अस्तित्व रहँदैन र सहकार्यका सम्भावना हुँदैन । अझ कतिपयमा त उग्रवाद तथा हिंसाविना देशभक्ति नै हुँदैन भन्ने सोचसमेत रहेको हुन्छ ।
हतियार उठाउन तयार नहुने र उग्र राष्ट्रवादलाई स्वीकार नगर्नेलाई राष्ट्रद्रोहीको बिल्ला भिराउनसमेत किञ्चित पछि नपर्ने उदाहरणहरु पनि भेटिन्छन् । जनसञ्चारका माध्यम, सामाजिक संजाल तथा विभिन्न भेलाहरुमा यस्ता आक्रामक आरोपप्रत्यारोप सुन्न र देख्न पाइन्छ ।
कुनै पनि लक्ष्यमा पुग्न एउटै बाटोमात्र हुन्छ भन्ने मान्यता सर्वथा गलत छ चाहे त्यो राजनीतिबाट राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिको प्रसंग नै किन नहोस् । वास्तवमा भन्ने हो भने कुनै पनि राष्ट्रको उद्देश्य प्राप्ति गर्न विभिन्न राजनीतिक मार्गहरु हुन सक्छन् । कुनै मार्ग सिधा तर कठिन हुनसक्छ भने कुनै घुमाउरो भए पनि सहज होला, कुनै छिटै पुगिने हुन्छ भने कुनै ढिलो भए पनि हिंसाविनै पुगिने होला ।
एउटै भूगोलभित्र रहने जनमानसमा पनि कस्तो राजनीतिक उपागम(एप्रोच) चुन्ने भन्ने पृथकपृथक धारणा हुन सक्छ । त्यो व्यक्तिगत इच्छा तथा चाहनामा समेत भर पर्छ । लक्ष्य एउटै भए पनि बाटाहरु फरक छनोट हुन सक्छन् । यस्तोमा कसको मार्ग सही र कसको गलत भनी छुट्याउने कसरी भन्ने अहम् प्रश्न बनेर हाम्रो सामु तेर्सिन्छ ।
जब हामी कुन बाटो सही हो कुन बाटो गलत हो भनी केलाउन प्रयत्न गछौँ हामीलाई लाग्न सक्छ जबसम्म लक्ष्यमा पुगिँदैन कसको बाटो सही हो भनी छुट्याउन सकिँदैन । अर्थात्, लक्ष्यमा पुग्नेको पथ सही तर नपुग्नेको गलत तर मूल्याङ्कनको यो उपाय कम वस्तुगत र बढी मनोगत हुन्छ । किनभने राजनीतिक पार्र्टीका दर्शन तथा दूरदृष्टि सामान्यतः विहङ्गम तथा अमूर्त हुन्छन् ।
तर, विचारणीय कुरा के छ भने जसरी व्यक्तिको जीवनमा मूल लक्ष्य निश्चित भए पनि जीवन जीउने क्रममा अन्य सहायक लक्ष्यहरु परिवर्तनशील हुन्छन् । त्यस्तै राष्ट्रको दीर्घकालीन लक्ष्य अपरिवर्तनीय भए पनि त्यहाँ पुग्नुअघि कैयौं महत्त्वपूर्ण सहायक लक्ष्यहरु पार गर्दै जानुपर्ने हुन्छ जुन समय र परिस्थिति अनुरुप हेरफेर गर्नुपर्ने हुनसक्छ । तसर्थ, लक्ष्यको आधारमा कुनै दलको मूल्याङ्कन गर्नु असम्भव नै नभए पनि कठिन कार्य अवश्य हो ।
खासमा, अन्तिम लक्ष्यमात्र नभई त्यहाँ पुग्नुअघिका गतिविधिहरु पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । अर्थात्, जसरी व्यक्तिगत जीवनमा अन्तिम गन्तव्यमात्र नभई जीवनको यात्रा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ त्यसरी नै राष्ट्रको आखिरी लक्ष्यमात्र नभई त्यहाँ पुग्ने बाटाहरु पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । जीवनको सम्पूर्ण यात्रा दुःखमय छ भने अन्तिम लक्ष्य प्राप्त गरेरमात्र के गर्ने भन्ने यक्षप्रश्न हाम्रो सामु प्रकट हुन्छ ।
त्यसैले एउटा व्यक्तिको जीवनमा जसरी ‘यात्रा’ र ‘गन्तव्य’ दुवै महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ त्यसरी राजनीतिक तथा राष्ट्रिय जीवनमा पनि दुवै उत्तिकै मूल्यवान छन् । दुई तीन पिँढीपछि मात्र पुगिने दीर्घकालीन गन्तव्यको लागि त्यहाँ पुग्नु अगाडिको यात्रा अत्यन्तै सहज नभए पनि उपयुक्त हुनु भने आवश्यक छ । नत्र जसरी जर्मनीमा हिटलरले र कम्पुचिया (हाल कम्बोडिया)मा पोलपोटले नरसंहारको बाटो अवलम्बन गरे त्यस्तो बाटोबाट राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिको जतिसुकै तर्क प्रस्तुत गरे पनि औचित्यहीन हुन्छ ।
तसर्थ, कुनै पनि राष्ट्रको दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्तिको लागि प्रयत्नरत रहँदा यात्रा र गन्तव्य दुवै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । प्रायशः सबै राजनीतिक पार्र्टीको मूल दर्शन असल नै हुन्छ । त्यसैले, गन्तव्यलाई थाती राखी राजनीतिक दलले तय गरेको बाटो र यात्राको कुरा गर्नुपर्दा कुन असल र कुन खराब भनी निक्र्योल गर्न गुण र दोषको आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि राजनीतिक पार्र्टी सर्वगुण सम्पन्न हुँदैन । अनि, सामान्यतया सबै राजनीतिक पार्र्टीको कार्यान्वयन तहमा केही न केही कमजोरी हुन्छन् नै । त्यसैले कुनै एक राजनीतिक पार्टीमा लगाव वा झुकाव भएकै कारणले सो पार्टीप्रति आबद्ध नभएका व्यक्ति विशेषलाई तिरस्कार गर्नु अथवा हुर्मत लिनु कुनै पनि हिसाबले मनासिब देखिँदैन । कुनै अमुक राजनीतिक दर्शनमा त्यति धेरै आस्था एवम् विश्वास छ भने जनमानसको मन जितेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु उपयुक्त हुन्छ जबरजस्ती वा कटु वचन गरेर होइन ।
बुझ्नुपर्ने कुरा, राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिको खातिर गन्तव्यतर्फ अघि बढ्ने क्रममा कुन बाटो मूल बाटो हो वा कुन सहायक भन्ने परख गर्ने र खुट्याउने काम नितान्त व्यक्तिगत हो ।
राष्ट्रिय लक्ष्यको बहस चलिरहँदा राष्ट्रियताका प्रसंग उठ्नु पनि स्वाभाविकै हो । तर मनन गर्नु पर्ने कुरा के छ भने राजनीतिक वाद जस्तै प्रतीकात्मक राष्ट्रियता भनेको साध्य होइन साधन हो । साध्य भनेको राष्ट्रिय लक्ष्य हो । कसैले कुनै अमुक पोसाक लगाउँदैमा, अमुक भाषा बोल्दैमा वा अमुक धर्म ग्रहण गर्दैमा राष्ट्रियता झल्कने अन्यथा नझल्कने भनी बुझ्नु अहिलेको एक्काईसौं शताब्दीमा संकीर्ण बुझाइ हो ।
नेपाली राष्ट्रियताको मर्म भनेको नेपाल भनिने भूगोलभित्र बसोवास गर्ने सम्पूर्ण नेपालीजनको उन्नति, प्रगति, सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र आत्मसम्मान सुनिश्चित गरिनु हो । अनि, उनीहरुको सन्तान र दरसन्तानको सुखद् भविष्यको सुनिश्चितता गरिनु पनि हो । यसलाई सामान्यतया राष्ट्रिय हित (नेसनल इन्ट्रेस्ट)का रुपमा बुझ्ने गरिन्छ ।
कुनै तोकिएको पहिरन, भाषा, धर्म वा त्यस्तै अन्य राष्ट्रियताको मापदण्डमार्फत समग्र नेपालीको हित हुँदैन भने त्यस्तो राष्ट्रवाद खोक्रो हुन्छ । तर राष्ट्रियताका कुनै निश्चित् ‘सिम्बोलिज्म’ बिना पनि समग्र नेपालीले अन्तिम उद्देश्य प्राप्त गर्ने कुनै मार्ग छ र त्यसले जनभावनाको कदर गर्छ भने त्यो मार्ग जुनसुकै वादमा रङ्ंगिएको वा नरङ्गिएको भए पनि सही ठहर्छ ।
तसर्थ, यहाँ कसैले कसैको राष्ट्रवादका बारेमा सवाल वा शंका गर्नुअघि राष्ट्रियताका नाममा गरिने खोक्रो आडम्बरहरुलाई आधार मानेर मूल्याङ्कन नगरी राष्ट्रियता र राष्ट्रिय लक्ष्यको सन्दर्भमा उसको धारणा के छ भन्ने बुझ्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कसैले भावनामा बगेर चर्का विरोधका कुरा गर्दा उसका राष्ट्रवाद महान् हुने अथवा शालीन एवम् वस्तुपरक चिन्तन गर्दा राष्ट्रवाद तुच्छ हुने होइन ।
हेक्का रहोस्, कुनै वाद वा विरोधमा नलागी पनि मानिसले राजनीतिक चिन्तन गर्न सक्छ भनी बुझ्नु र कसैले पनि अरुको राष्ट्रियताको मूल्याङ्कन कुनै वादको कसीमा गर्नु हुंदैन भनी मनन गर्नु जरुरी छ । र साथै, के पनि बुझ्नु जरुरी छ भने एउटा नागरिकले कुनै दलगत राजनीतिमा संलग्न नभईकन स्वतन्त्र चिन्तन या अन्य कुनै माध्यमबाट पनि राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान दिन सक्छ र सच्चा देशभक्त हुन सक्छ ।